Obi ụtọ ụbọchị iri nke obi ụtọ, Ọdịdị, mgbanwe agụgụ kọmputa | Akụkọ akụrụngwa
Obi ụtọ afọ iri nke obi ụtọ, Ọdịdị, mgbanwe elektrọnik
Ruben gallardo | | Amazon, ndị na-agụ akwụkwọ
Enwere ụlọ ọrụ dị na ngalaba teknụzụ ndị na-azụ ahịa nke gbanwere ahịa: Apple nke ekwentị nwere ọgụgụ isi na mbadamba ma ọ bụ Tesla nke ụgbọ ala eletrik - na ugbu a nwalee ya na gwongworo-. Agbanyeghị, nnukwu Amazon emeela nke ọma n'otu n'ime mpaghara ọ kachasị achịkwa: nke nwere akwụkwọ elektrọnik.
Kpọmkwem afọ 10 gara aga enwere ndị ọzọ dị ike n'ahịa: nhọrọ ndị Japan Sony nyere ma ọ bụ ọbụlagodi nhọrọ ndị Spanish Grammata nyere. Agbanyeghị, ihe Amazon Kindle maara etu esi eme nke ọma bụ inwe ezigbo usoro okike gburugburu ya nke ga-akwado ihe niile na onye ọrụ njedebe. Kedu nhọrọ ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ nyere iji jupụta eReader na ọdịnaya?
1 Knowingmara otu esi ewu usoro ihe eji eme ihe na-eme onye ọrụ ahụ
2 Isi 'ngwaike' ndozi
3 Njikọ nke ụdị abụọ: dị ezigbo mkpa maka ahịa Amazon
4 Isi 'mmeri' nke Kindle: ọtụtụ onyinye na akwụkwọ yana ọrụ metụtara
5 Nkọwapụta onwe onye: onye ọ bụla nwere ike ịnwe akwụkwọ ha na Amazon
6 Akwụkwọ kacha ere ahịa na Amazon Kindle
6.1 Akwụkwọ akụkọ akụkọ kacha ere:
6.2 Akwụkwọ ndị na-abụghị akụkọ ifo kacha ere ahịa:
Knowingmara otu esi ewu usoro ihe eji eme ihe na-eme onye ọrụ ahụ
N'ime afọ 10 ndị a niile, Kindle etinyela onwe ya dị ka nọmba na-enweghị mgbagha na ngalaba ink kọmputa. Ndị gụrụ akwụkwọ kachasị mara nke ọma mara na ọ bụ naanị ụzọ ga - esi nwee ike iburu gị karịa aha; na-enweghị iburu ibu na azụ; jiri teknụzụ —e-Ink- nke anaghị ada mbà n’anya ike na ọ ga - enyere gị aka ịnwe ọbá akwụkwọ ọfụma n’enweghị ejupụta shelf n’ụlọ gị.
N'otu aka ahụ, ihe Amazon makwaara otu esi eme nke ọma bụ zọọ na multiplatform. Ma ọ bụrụ na ịhapụ Kdị gị n'ụlọ, olee otu ị ga-esi na-agụ akwụkwọ? Nke a bụ ọzọ nke akụ na ihu ọma nke ngwaọrụ na ikpo okwu nke online azụmahịa ibu. Ma ọ bụ na-enye gị ohere ịnwe ngwa ngwa akọwapụtara na sistemụ arụmọrụ ọ bụla na mpaghara ahụ: Android, iOS, Windows ma ọ bụ Mac.
Isi 'ngwaike' ndozi
Egwuregwu Kindle dị ike, mana ọ bụkwa eziokwu na ngwaọrụ ga-ebili n'oge ahụ. Jeff Bezos amatala ka esi egwu kaadị nke ọma. Kemgbe afọ 10 ndị a, akwụkwọ akụkọ e-akwụkwọ a ma ama agbanweela. Modelsdị ndị izizi nwere kiiboodu QWERTY zuru ezu iji mee ka nkọwa na-adị mfe. Otú ọ dị, onye ọrụ ahụ ga-echefu banyere ọkụ ọkụ ma ọ bụ ihuenyo mmetụ na 2007 ma ọ bụ 2008. Ọ bụghị ruo na njedebe nke 2011 mgbe mbụ Kindle nwere ihuenyo mmetụ pụtara: Kindle Touch.
Kemgbe ahụ, Amazon ahapụbeghị atụmatụ ahụ na ụdị ya kachasị elu. Nke ahụ bụ, katalọgụ taa na 2017 ọ mejupụtara ụdị 4 dị iche iche ma ha niile hapụrụ bọtịnụ anụ ahụ iji mee ka ogwe aka dị iche iche nwee ike ịgbanye peeji ahụ.
Na mgbakwunye, site na ụlọ ọrụ Jeff Bezos ha chekwara echiche banyere ọnọdụ ịgụ ihe niile. Yabụ ọ kachasị mma ịmegharị ụdị ụfọdụ n'ọnọdụ ndị na-adịchaghị: ụdị nwere backlit e-ink ngosi maka ndị na-agụ abalị na nso nso a, ihe nlereanya nke nwere ike diri mmiri.
Njikọ nke ụdị abụọ: dị ezigbo mkpa maka ahịa Amazon
N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ onye na - agụ akwụkwọ zuru ezu, ị ga - abanye na njikọ ikuku nwere ike ịnye onye ọrụ nnwere onwe ibudata ebe ọ bụla. Ma otu a ka odi: WiFi na 3G nwere njikọ ka enwere ike ibudata akwụkwọ oge niile. Na mgbakwunye, otu n'ime isi ihe mere eji anabata ụdị 3G bụ nke ọma Amazon na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ njikọ 3G gị; ụlọ ọrụ na-elekọta karịa na ị na-aga n'ihu ịzụta ebuka ma jiri usoro ya.
Isi 'mmeri' nke Kindle: ọtụtụ onyinye na akwụkwọ yana ọrụ metụtara
Ọ bụrụ n’itinyerela akwụkwọ ndekọ Kindle dị ukwuu, ị ga-ahụ na ọ dị oke - ọ dị ka ịnọ n’ọbá akwụkwọ anụ ahụ ebe ị nwere ike ịchọta aha ọ bụla. Ọzọkwa, E nwere ụdị ahịa dị iche iche, nke onye ahịa ga-enyocha ihe ga-adịrị ya mma. Ga-enwe Kindle Flash nke ụbọchị: onyinye a na - ewekarị oge 24 nke Amazon na - enye akwụkwọ elektrọnik na mbelata ego nwere ike iru 80%.
Enwekwara ike ibudata utu aha na - enweghị oke - onyinye a bụ maka ndị na - agụ akwụkwọ na - agụ akwụkwọ - nke a na - akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa nke 9,99 euro ma nye gị ohere ịnụ ụtọ ihe karịrị otu nde aha ma ọ bụ chọta akwụkwọ onyinye maka ihe na-erughị otu euro, euro 2 , wdg. A na-akpọ modality ahụ Ọdịdị Unlimited.
Nkọwapụta onwe onye: onye ọ bụla nwere ike ịnwe akwụkwọ ha na Amazon
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, enwere okwu nke Amazon maara otu esi egwu kaadị ya nke ọma. Enwere ọtụtụ ndị edemede mgbe ha mechara ime ọrụ ha, n'ihi ihe ọ bụla kpatara na ha enweghị ike ịchọta onye mbipụta akwụkwọ bipụtara ha. Na ebe a ka Amazon na-abanye n’egwuregwu ọzọ: ụlọ ọrụ na-enye ohere ibipụta onwe n'okpuru ikpo okwu Kindle Direct Publishing. Na, o doro anya, utu aha e bipụtara site na ụzọ a bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na nbudata. N'ezie, ụgwọ ikpeazụ nke ọrụ a na-adọrọkarị mma.
Akwụkwọ kacha ere ahịa na Amazon Kindle
Ọnụ ụzọ Mashable gosiri na nso nso a ndepụta nke akwụkwọ kacha ere ere n'oge niile n'okpuru usoro Kindle ebe ọ bụ na ọ malitere na 2007. Ọzọ anyị ga-ahapụ gị na ndepụta nke akụkọ ifo na aha ndị na-abụghị akụkọ ifo.
Akwụkwọ akụkọ akụkọ kacha ere:
Zọ iri ise nke isi awọ (nke iri ise)
Na ọkụ (Agụụ Egwuregwu)
Mockingjay (EGO EGO)
Ọchịchịrị ("Iri Ise Onyunyo" dị ka onye Christian Gray 2 si kọọ)
Iri abụọ na ise (Fifty Shades 3)
Echefuola (Kachasị mma na-ere ere)
Nwatakịrị nwanyị nọ ụgbọ oloko (International Planet)
Idsmụaka na Ladmụ nwanyị: Onye kacha ere ahịa nke ụmụ Maid na ụmụ nwanyị gbadoro ụkwụ na ya, otu n'ime mkpọsa a na-atụ anya n'oge a. (Obere akpa)
N'okpuru otu Star (INK CLOUD) nke JOHN GREEN (16 Oct 2014) Akara mkpuchi
Akwụkwọ ndị na-abụghị akụkọ ifo kacha ere ahịa:
Akwụsịghị: Agha Worldwa nke Abụọ Akụkọ nke Nlanarị, Nguzogide, na Mgbapụta
Eluigwe Dị Adị (Ngosipụta)
Anụ ọhịa (Rocabolsillo Bestseller)
Owgbọ mmiri dị ka otu nwoke (Akwụkwọ Nordic - Captain Swing)
Steve Jobs (kacha mma na-ere)
Asụsụ 5 nke :hụnanya: Nzuzo nke Endhụnanya Na-adịgide Adịgide (Ọkacha mmasị / Ọkacha mmasị)
Sniper (American Sniper - Spanish Edition): The autobiography nke kasị egbu sinipa na akụkọ ihe mere eme nke United States of America
Omume asaa nke ndị bara ezigbo uru - mbipute na emelitere (ụlọ ọrụ na talent)
Ndụ anwụghị anwụ nke Henrietta Lakes (Ngosipụta. Science)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Obi ụtọ afọ iri nke obi ụtọ, Ọdịdị, mgbanwe elektrọnik
Ihe ọhụrụ Xbox One X malitere na ụkwụ na-ezighi ezi na Japan
Boston Dynamics juru anyị anya na mascot robotic ọhụrụ ya